Hiran State - News: HS:- Gudigii diyaarin lahaa doorashada gudoomiyaha baarlamanka Soamliya oo lagu dhawaaqay.
HS:- Gudigii diyaarin lahaa doorashada gudoomiyaha baarlamanka Soamliya oo lagu dhawaaqay.
HS:- kadib isku day dhawr ah oo la doonayey in lagu hor istaago amaba lagu carqaladeeyo habsami u socodka kulamada baarlamaanka ayaa ugu danbeyn waxaa maanta lagu dhawaaqay gudigii howshaas soo diyaarin lahaa.
Gudoonka sare ee barlamanka Kumeel gaarka ayaa ku dhawaaqay guddi diyaariya doorashada gudoomiyaha cusub ee barlamanka Soomaaliya kadib kulan ay Xildhibaanada maanta ku yeesheen Xarunta golaha shacabka oo ku dhamaaday buuq la,aan.
Xildhibaanadaani oo maanta kulanka ku yeeshay Xarunta golaha shacabka ee Magaalada Muqdisho ayaa waxa ay soo saareen Warsaxaafadeed lagu magacaabay ilaa 33-Xubnood oo ah guddiga qaban qaabada doorashada loo galayo xilka gudoomiyenimo ee barlamanka kumeel gaarka ee hada la qaban qaabinayo doorashadiisa.
War murtiyeedka ay soo saareen mudanayasha ayaa lagu xusay in maadaama 13-ka Diseember xilkii laga qaaday gudoomiyahii hore ee baarlamanka xildhibaan Shariif Xasan Sheekh Aadan in ay lama huraan tahay in la doorto gudoomiye cusub oo si sharci ah u qabta fadhiyada uu yeelanayo barlamanka taasi oo sida muuqata hada ku dhaw gabo gabo amaba meel fiican mareysa.
Mid ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee kulanka iskugu yimid maanta laguna magacaabo C/qaadir Sheekh Ismaaciil ayaa Saxaafadda u aqriyay Xubnaha la magacaabay, isagoo xusay inay diyaarin doonaan xubnaha la magacaabay.
1-Qorsho howleedka shaqo ee barlamaanka kumeel gaarka.
2- Qabashada araajida musharaxiinta isu soo tagaysay xilka gudoomiyenimo ee la filayo in la doortodhawaantan.
3- Diyaarinta qalabka iyo dikumintiga howshaas fududeyn lahaa.
4- Ku dhawaaqidda waqtiga ay dhacayso doorashada gudoomiyaha cusub.
5- Sugidda ammaanka goobta ay ka dhacayso doorashada maalinta ay dhaceyso iyo kadiba.
6-Maamulidda iyo ilaalinta habsami u socodka howlaha doorashada iyo wacyi galinta, iyadoo Wasaxaafadeedkaasi uu ku saxiixnaa gudoomiye ku xigeenka labaad ee barlamanka xildhibaan Axmed Dhimbil Rooble.
Si kastaba waxaa meelo badan oo dalka iyo dibada ka mid ah laga soo dhaweeyey xil ka qadistii dhawaantan lagu sameeyey gudoomiyahii hore oo isagu aan waligiis u hogaansamin sharciga iyo dastuurka u degsan wadanka laakinse hada ku jiro marxalad adag oo ay adag tahay si uu uga bad baado. dadka arimaha siyaasada Somaliya u guur gala ayaa sheegaya in ay xukumada dhan meesha ka bixi doonto hadii leys hortaago kulamada baarlamaanka oo la filayo iney faraha la soo gasho wasaarada arimaha gudaha malmaha soo socda maadaama aysan wasiiro badan kala aqoon awooda baarlamaanka iyo inuu yahay hay'adda sharci dejinta oo aysanba xukumad imaateen baarlamaan la,aantiis.
Wararkii ugu daneyey ee naga soo gaaraya magaalada Mogdisho ayaa sheegaya in maalmaha inagu soo aadan ay qorsheynayaan qaar ka mid ah golaha wasiirada oo siweyn u taageersan gudoomiyahii hore ee baarlamanka iney ciidamo beeleed ay ku sheegi doonaan booliis geeyn doonaan xarunta golaha shacabka waxaana ciidamadaasi la geynayo goobta ay ku kulmayaan mudanayasha hada lagu diyaariyey qeybo ka mid ah Mogdisho.
Laakinse marka arinta dhinaca kale laga eego beesha caalamka siweyn ayey xaalada Somaliya isha ugu heysaa waxaana la sugayaa oo kaliya bal cida awooda u leh iney hor istaagto kulamada baarlamaanka, kadibna isagaaba si sahlan u bur buri doono dastuurka hada lagu shaqeeyo ee lagu soo dhoodhoobay dalka Kenya 2004kii iyo waxii ka danbeeye marba hadii aysanba xor aheyn amaba aysan kulmi karin ku dhawaad 300 mudane baarlamaani ah.
Shirkii maanta looga dhawaaqay gudigan soo diyaarinaya doorashada soo socota ayaa wax badan ka duwanaa kii shaleyto buuqa hareeyey kadib markii ay mudanayaashii fikirkaan ka soo horjeeday ay hada howsha dhinacooda ka wadaan kadib markii ay arkeen in mudanayaasha badankood ay ku qanacsan yahiin xil ka qaadista gudoomiyahii hore.
La soco doorashada gudoomiyaha cusub iyo xaalada Somaliya ee cakiran
· admin on December 22 2011 12:10:45 · 0 Comments · 1660 Reads ·
14,633,632 unique visits